Xubno ka tirsan Baarlamanka Soomaaliya iyo madaxda Puntland oo ka wada-hadalay xiriirka (Dhegeyso) – Radio Daljir
Agoosto 10, 2013 4:27 b 0
Garoowe, Aug 10, 2013 – Puntland waxaa weli ku sugan xilibaano ka tirsan baarlamanka dowladda Federaalka ah, kuwaasi oo dhowaan soo gaaray deeganadan, mar ay saxaafada gudaha la hadleen ayey shaaciyeen in halkaan ay ?u joogaan arrimo badan.
Xilibaan Cabdiladiif Muuse Nuur oo la hadlay Radio Daljir wuxuu sheegay in ay Puntland kula kumeen madax kala gedisan oo uu ku jiro Madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Faroole, Qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo isimada Puntland qeybtood.
Ma uusan bixin faah-faahin dheeraad ah oo la xiriirta in xilibaanadu in ay kala hadleen Puntland khilaafka soo kala dhex-galay maamulka iyo Dowladda dhexe, wuxuuse sheegay in ay in badan isla soo qaadeen siyaasada dalka iyo dhaq-dhaqaaqa siyaasadeed ee wakhtigan ka jira Puntland.
Docda kale Mudane Maxamed Cabdi yuusuf oo xubnahaas ka tirsan waxaa uu sheegay in ay haatan guda-gelayaan sidii ay Puntland ugala hadli lahaayeen eedeymaha ka soo baxaya dastuurka federaalka ah ee ka yimid dhinaca Puntland, taasi oo muran badan iyo mad-madow soo kala dhex gelisay dowladda dhexe iyo Puntland.
Mudane Yuusuf wuxuu sheegay in ay jiraan qoddobo badan oo ay Puntland ?soo bandhigtay kuwaasi oo wax ka bedel lagu sameeyey, xilibaanka ayaa sheegay in ay jiraan qodobo badan oo Dastuurka ka tirsan oo aan la taaban karin sida midnimada guud iyo xuduudaha, balse wixii kale oo dhan dib u eegis lagu sameyn doono.
Madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Faroole ayaa dhowaan sheegay in ay jareen xiriirkii u dhexeeyey Puntland iyo Dowladda dhexe, Madaxweynuhu wuxuu sheegay in xiriirkaasi soo noqon karo marka si rasmi ah loogu dhaqmo dastuurkii lagu heshiiyey, wuxuu mar kale ku cel celiyey in dastuur wax ka bedel lagu sameeyey .
Dhegeyso hadalka xilibaan Abdi-ladiif oo u waramay Xaliimo Sacdiyo Abdulahi